Kandidà Ravalomanana Marc : Nahemotra ny hetsika eny Ambohijatovo -
AccueilRaharaham-pirenenaKandidà Ravalomanana Marc : Nahemotra ny hetsika eny Ambohijatovo
10/11/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Voafaritry ny kandidà Marc Ravalomanana, fa anio no hisaorany ny mpifidy azy rehetra, etsy amin’ ny kianjan’Ambohijatovo. Ny fisaorana sy fankasitrahana ny mpifidy izay be mpanao amin’ ny tany demokratika, ary maro ihany koa ireo kandidà hafa izay efa nanao izany, saingy tamin’ny alalan’ ny tambajotra sosialy. Ho an’ny kandidà Marc Ravalomanana kosa, ho fanajana ireo vahoaka tahaka ny tamin’ ny fampielezan-kevitra dia fihaonana mivantana no noeritreretiny. Voatery nahemotra anefa izay fisaorana mivantana hifanatrehana amin’ ny vahoaka izay, noho ny mbola fandehanan’ny fanisam-bato sy hialana amin’izay mety ho fanararaotana. Raha ny zava-misy amin’ izao fotoana tokoa mantsy dia maro ireo mpanenjika ity kandidà ity, ka ho fampisehoana ny fahendrena sy soatoavina Malagasy, dia nisafidy ny hanemotra ny fotoanan’ny kandidà avy amin’ny Tiako i Madagasikara. Ankoatra izay dia nambaran’ ny solombavambahoaka TIM, Hanitra Razafimanantsoa, fa antony nanemorana ny fotoana ihany koa ny fitandroana ny filaminana amin’ izao fotoana izao.
Fahendrena tanteraka tokoa no nasehon’ny kandidà Marc Ravalomanana tamin’ ny fanafoanana ny hetsika, satria dia havadiky ny haino aman-jerin’ ny mpifanandrina aminy fa tsy fankasitrahana ny voka-pifidianana no antony. Hiaraha-mahalala rahateo ny fahaiza-manaon’ ny kandidà mpifanandrina amin-dRavalomanana Marc, amin’ ny fampiasana olona hanakorontana, ka aleo misoroka dieny izao. Ny mahagaga aza dia ny filazan’ ireo mpanao gazetin’ i Andry Rajoelina fa tsy nahazo alalana ny hetsika, izay nodisoin’ny solombavambahoaka TIM, Hanitra Razafimanantsoa. “Manana ary nahazo alalana mazava avy amin’ ny prefektioran’ny polisin’Antananarivo izay, saingy noho ny lafin’ny fandriam-pahalemana dia nandray fanapahan-kevitra”, hoy hatrany ny solombavambahoaka Hanitra Razafimanantsoa.
Mampiseho fahendrena tanteraka ny kandidà Marc Ravalomanana amin’ izao fotoana izao, na dia eo aza ny fihantsiana sy fanosoram-potaka atao aminy, isan’ny mbola nolazain’ireo haino aman-jerin’ny kandidà Andry Rajoelina aza fa ny hetsika anio io, dia famerenana ny zava-nisy tamin’ ny taona 2002. Nambaran’io haino aman-jery io ihany koa, ary mahagaga ny fahenoana fa misandra-tena ho lany amin’ ny dingana voalohany Ravalomanana. Mipetraka noho izany ny fanontaniana hoe, tsy Andry Rajoelina ve no nilaza fa lany amin’ ny fifidianana dingana voalohany ny tenany. Moa va tsy ny mpomba an’i Andry Rajoelina no nanakorontana ireo mpampiely hevitry ny Tim, tany Antsirabe araka ny sary miparitaka amin’ny tambajotra sosialy. Noho izany mba hialana amin’ireo fomba ratsin’ny mpifanandrina aminy, dia nanetry tena hitsinjovana hatrany ny filaminana ny kandidà Marc Ravalomanana
TAFA-PIFIDIANANA : Tabera Randriamanantsoa sy Ravalomanana Marc
Tabera Randriamanantsoa Ny vahoaka no masi-mandidy Miainga eny ifotony ny fampandrosoana atao rehetra. Izay ihany no lalana ahafahana manala ny vahoaka malagasy anatin’izao fahantrana lalina izao, raha ny nambaran’i Tabera Randriamanantsoa, kandidà atolotry ny antoko ...Tohiny
Depiote Nicolas Randrianasolo : « Tokony hiala ireo izay mpamingana ny Filoha »
SSM : Lasa mpikarama an’ady